DAAWO: Madaxweyanah PL oo maanta arrimo waa weyn u sheegaya Wasiiradiisa.
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland SIciid Cabdullaahi Deni oo 16 cisho ee lasoo dhaafay ku maqnaa safar dibada ah ayaa shalay dib ugu laabtay Puntland, mana jirto wax shir saxaafadeed ah oo u sheegay Saxaafadda, inkastoo safarkiisa inta ugu badan ku wajahnaa arrimo isaga u gaar ah, marka laga reebo kulamadii magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Madaxweyne Deni ayaa maanta shir gudoomin doona kulanka golaha Wasiiradda, kaas oo ay uga hadli doonaan arrimaha ku wajahan ammaanka, La shaqeynta dawladda Soomaaliya, Hanaanka Maaliyadda iyo qabashada kulanka Maalgashiga Puntland oo dhici doona 3 maalmood ka dib.
Kulanka maanta qodobada lagu soo qaadi doona, waxaa kamid noqonaya waxyaabaha ay wasaaraddaha Puntland la tagi doonaan shirka Maalgashiga oo ay imaan doonaan dad kala duwan oo daneynaya in ay qeyb ka noqdaan arrimaha maalgashigan.
HALKAAN KA DAAWO WARARKII U DAMBEEYEY
Sidaas oo kale sharuucda la xariirta maalgashiga ayaa kamid ah qodobada ugu waa weyn ee indhaha lagu hayo, iyadoo ay Puntland sheegtay in ay soo dhaweynayso Maalgashadayaal ayaa haddana caqabadaha jira ay yihiin kuwa badan.
Talaabada shirkan iyo qabashadiisa ayaaa ahayd mid uu la yimi Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, waxaana shirkan lafilayaa in ay ka soo qeybgalaan xubno kala duwan oo ay ka mid yihiin dalalka taageera Soomaaliya.
Ammaanka ayaa la adkeeyey, ciidamo badan ayaa ladhigay jidadka muhiimka ah ee magaalada, maalmaha uu socon doono kulanka maalgashigana waxaa la adkeeyey isku socodka guud ee magaalada, sidda ay sheegayaan saraakiisha Ammaanka.